पत्रकार महासंघ चुनावको मतपरिणाम: कहाँ कसको जित ? | Kailashkhabar.com
गृहपृष्ठ › कैलाश फोकस › पत्रकार महासंघ चुनावको मतपरिणाम: कहाँ कसको जित ?
पत्रकार महासंघ चुनावको मतपरिणाम: कहाँ कसको जित ?
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार भएको चुनावको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।बिहीबार बिहानसम्म प्रदेश एसोसिएटबाट विकास कार्की र कृति भट्टराई केन्द्रीय कार्यसमितिमा विजयी भएका छन् ।
अध्यक्षमा बैकुण्ठ पराजुली बुधबार नै विजयी भएका थिए ।यस्तै झापामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रेस युनियन एकराज गिरी नेतृत्वको प्यानलले अध्यक्षसहितका पदमा वर्चश्व कायम गरेको छ । दार्चुलामा भने कृष्ण धामी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । ललितपुर अध्यक्षका प्रेस संगठनका सागर न्यौपानेको लोकतान्त्रिक प्यानल विजयी भएका छन् ।
बझाङको अध्यक्षमा शैलेन्द्र रोकायाको प्यानल विजयी भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतको अध्यक्षमा सन्तोष थापा विजयी भएका छन् । पत्रकार महासंघ काभ्रेको अध्यक्षमा प्रेस युनियनका बद्रीप्रसाद तिमल्सिना विजयी भएका छन् । दोलखामा नेपाल प्रेस युनियनका दीपशंकर चौलागाँई अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । डोटीमा नेपाल प्रेस युनियनका मोहन शाहीको प्यानल नै विजयी भएको छ ।
यस्तै बर्दियामा यादव आचार्यको लोकतान्त्रिक प्यानल नै विजयी भएको छ । पाल्पामा रेखीराम राना अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । गुल्मीमा माधव नेपाल टोललाल अर्याल विजयी भएका छन् । अर्घाखाँचीमा अशोक खनाल विजयी भएका छन् । रोल्पामा नविनलोचन मगरको प्यानल विजय भएको छ । प्युठान र कपिलवस्तुमा प्रेस युनियनको नेतृत्वमा जिल्लाको नेतृत्व आएको छ ।
कपिलवस्तुबाट जिल्ला अध्यक्ष किरणमान ब्रर्जाचार्य सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन् । अहिलेसम्मको मतपरिणाममा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानलले धेरै ठाउँमा जित हात पारेको छ । महासंघको अध्यक्षमा पोखरेल र निर्मला शर्माको प्यानल प्रतिष्पर्धामा थियो । यस्तै अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका गजेन्द्र बुढाथोकी पनि अग्रस्थानमा छन् ।
पाल्पाबाट केन्द्रीय अध्यक्षमा विपुल पोखरेललाई ४१ र निर्मला शर्मालाई ४७ मत आएको छ भने प्रदेश अध्यक्षमा बसन्त गिरीलाई २८ र भरत केसीलाई ४५ मत आएको छ । रोल्पाबाट केन्द्रीय अध्यक्षमा विपुल पोखरेललाई ४६ र निर्मला शर्मालाई २८ मत आएको छ भने प्रदेश अध्यक्षमा बसन्त गिरीलाई ४७ र भरत केसीलाई २६ मत आएको छ ।
कपिलवस्तुबाट प्रदेश अध्यक्षमा बसन्त गिरीलाई १२२ र भरत केसीलाई ३० मत आएको छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्मको तथ्याङ्क यस्तै रहेको छ भने मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।